ကျွန်ုပ်၏ပီရူးအစားအစာ - ကျွန်ုပ်၏ပီရူးအစားအစာ
ပီရူး နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည် တောင်အမေရိက အမေဇုန်သစ်တော၏ ကြီးမားသော အပိုင်းကို လွှမ်းခြုံထားပြီး အမြင့်ပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး Inca မြို့များ ပါဝင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los အင်ဒီးစ. ထို့အပြင် ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက Inca Trail မှ မြင့်မြတ်သောတောင်ကြားတစ်ခု၊ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှု၊ အစဉ်အလာနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သမိုင်းကြောင်းများကို သိရှိစေသည့် တိုက်ကြီးရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားသော လက်မှုပညာများနှင့် ကိုလိုနီခေတ် ရတနာများနှင့် အကြီးဆုံးရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ အရန်နေရာလည်းဖြစ်သည်။
ထို့အတူ ဤနယ်မြေသည် ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် နောင်တော်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအစားအစာများ၎င်းတို့၏ တမူထူးခြားသော အရသာနှင့် စတိုင်များဖြင့် ပြောဆို ဆက်စပ်ပေးသော ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံ၏ စရိုက်လက္ခဏာများ၊ ၎င်းတို့၏ စကားပြန်များ၏ ချစ်ခင်မှုနှင့် အပ်နှံမှုများနှင့် တည်းခိုနေထိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း ထောင်ပေါင်းများစွာကို ပီရူး အနံ့နှင့်ကိုက်သည်။
ဤအစာအာဟာရသည် အစုံဖြစ်သည်။ အထူးဟင်းလျာများနှင့် သောက်စရာများ ပီရူး ၎င်းသည် မြို့သူမြို့သားများ၏ ဘုံဘဝနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းမှာ မြို့ဟောင်း၏ အချက်အပြုတ် ဓလေ့ထုံးတမ်းကို ဥရောပအစားအစာနှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆက်စပ်နေသော အခြားအရာများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
ကြက်သားသည် ပီရူးအစာအိမ်၏ ဟင်းလျာအများစု၏ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး...
ဝက်သား Adobo ကြော်
ကြွယ်ဝသော၊ ချောမွေ့ပြီး အရည်ရွှမ်းသော ဟင်းလျာကို စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ Pork Adobo သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်...
Sillao Chicken သည် ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်တွင် တရုတ်အရှေ့တိုင်းဟင်းလျာများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု၏ အကြီးကျယ်ဆုံးကိုယ်စားပြုချက်ဖြစ်သည်။
ဟင်းရည်ကို တစ်မိနစ်စာ ချက်ပါ။
Soupala minuta သည် စျေးမကြီးသော၊ ပေါ့ပါးပြီး လျင်မြန်သော အိမ်လုပ်ဟင်းချိုဖြစ်ပြီး၊
ကြက်သား Escabeche သည် ပီရူးအစာစားခြင်း၏ ရိုးရာဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုဖြတ်၍ ၎င်း၏ကမ်းခြေများသို့ရောက်ရှိသွားသည်...
အနီရောင် tagliatelle စာရွက်
အနီရောင် ခေါက်ဆွဲခြောက်များ၏ သမိုင်းကြောင်းကို ၁၈၄၀ နှင့် ၁၈၈၀ ကြားတွင် ထင်ဟပ်စေသော ပမာဏများပြားသော ...
ကလေးတွေအတွက် surprise မနက်စာ
မည်သည့်အခါသမယမဆို အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ နံနက်စာ ပေးဆောင်ရန် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သလို ဤအရသာရှိသော ဟင်းလျာကို ညွှန်းဆိုသောအခါ ပို၍ပင်...
ဟင်းချိုခြောက်နှင့် Carapulca သည် ပီရူးဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အစာအိမ်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာများနှင့် သုတေသီအများအပြား၏ မှတ်တမ်းများအရ ...
တောတွင်းရှိ Patarashca သည် ယခင်က ပီရူးလူမျိုးများနှင့် နေထိုင်သူများဟု ယူဆရသည့် ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Ceviche ၏မူလဇစ်မြစ်အမှန်ကို မည်သည့်အခါမျှ မသိနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် နိုင်ငံပေါင်းများစွာက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အငြင်းပွားနေသော ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် ...
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဤဟင်းလျာအမျိုးအစားသည် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးအပါဆုံး ပြီးတော့ ဒါက ဥပမာတစ်ခုပါ။ fusion ဟင်းလျာ ၎င်း၏ ရှည်လျားသော ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသမိုင်းကြောင့်၊ ၎င်း၏အပြင်းထန်ဆုံးမျိုးကွဲတွင် ဟစ်စပိန်အစားအစာနှင့် ရှေးဟောင်းပီရူး၏ အခြေခံအသိပညာကို ရောနှောကာ၊ Andalusian တည်ရှိမှုနှင့် အတ္တလန္တိတ်ပင်လယ်ပြင်ရှိ ဆာဟာရအာဖရိကတိုက်အောက်ပိုင်းရှိ ကျွန်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါတွင်၊ နယ်မြေဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်၊ ပီရူး၏မူရင်းဟင်းလျာသည် အစဉ်အဆက်အပြောင်းလဲဆုံးဖြစ်ပြီး၊ စာအုပ်၏ကျေးဇူးကြောင့်၊57 ငါတို့ ပီရူးတွေ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲ” အထိ ရေတွက်ကြသည်။ ပုံမှန်ဟင်းပွဲ ၄၉၁. ပီရူး ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် ရှိတယ်။ ဟင်းချိုအမျိုးပေါင်း ၂၅၀၀ရိုးရာအချိုပွဲ 250 ကျော်နှင့် သဘာဝအချိုရည် 70 တို့ကို ယစ်မျိုးပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဟင်းလျာ ပမာဏတွေ ဘာကြောင့် တည်ရှိနေရတာလဲ လို့ သင် တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အဖြေက ကျေးဇူးပါ နိုင်ငံ၏ထူးခြားသောပထဝီဝင် လက်မှလက် ယဉ်ကျေးမှုရောနှော နှင့် အခြားသော ရှေးခေတ် စားသောက်မှု များကို ခေတ်မီ ဟင်းလျာများ နှင့် လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ပန်းကန်တစ်ခုစီတွင်ပါရှိသည်။ နူးညံ့သောအရသာများအရသာကဲ့သို့သော ၎င်းတို့ဖန်တီးခဲ့သည့် ကဏ္ဍနှင့် အချို့က ပိုမိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ marကမ်းခြေများမှ ဆားများနှင့် တောက်ပသော နေရောင်လွှမ်းသည့် အရာအားလုံး၏ ပြင်းထန်သော အရောင်အသွေးနှင့် အနံ့များပင်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် တောင်များပန်းများ၊ အရွက်များနှင့် သဘာဝတရား၏ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေသော ပန်းများ၊ အရွက်များနှင့် အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပါ၀င်သော ပြင်းထန်မှုနည်းသော နှစ်သက်မှုနှင့်အတူ အအေးနှင့်အရသာများ။ အစား၊ အလယ်ပိုင်းဇုန်အဆောက်အဦများ၊ ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများနှင့် နေကြတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တို့ ဝန်းရံထားသည့်အရာဖြစ်သည့် အစားအသောက်၊ အနာဂတ်နှင့် မယုံနိုင်စရာ လေများ ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ ကွဲလွဲမှုများနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် အရောင်များ ရှုပ်ထွေးမှုများပင်။
သို့သော်လည်း ပြည်ပမီဒီယာများက အခွင့်အရေးပေးသောကြောင့် ဤအရာအားလုံးကို မြည်းစမ်းကြည့်ရန် မဝေးလှပါ။ ရိုးရာဟင်းတွေကို သိပြီးစားပါ။ ပီရူးပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မတူညီသောရုံးခွဲများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာစားသောက်ဆိုင်များအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်စေရန်၊ သိကျွမ်းပြီး မှတ်သားနိုင်စေမည့် ဤမြေကြီး၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအရသာကို သတိရစေပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာ, သတင်းပေးစာမျက်နှာများ၊ မီဒီယာများနှင့် လူမှုကွန်ရက်များကွန်ရက်များနှင့် အများသူငှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နဖူးစည်းများပေါ်တွင် တည်ရှိသော ရုပ်မြင်သံကြားပစ္စည်းများအပြင် ဖန်တီးနိုင်သည့်အရာအားလုံးသည် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး ဆက်လက်ဖန်တီးရန် လိုအပ်သည့် အကြောင်းပြချက်ဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင်မှုများနှင့် သတိပေးချက်များကို ပြသထားသည်။
ဤအခြေအနေမျိုးတွင် သင်သည် ဤဟင်းလျာများ၊ အချိုရည်များ၊ အချိုပွဲများ၊ ဟင်းချိုများ၊ အခြောက်များကို နှစ်သက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ပြီး မျှဝေရန်နည်းလမ်းကို ရရှိစေရန်။ အရက်များနှင့် ချောက်ချားမှုများ၊ myperuvianfood သင့်အား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကမ်းလှမ်းသည်။ ဟင်းချက်နည်းစာရင်းအရသာရှိသော ကျက်သရေရှိပြီး လက်ရာမြောက်စွာ မြည်းစမ်းနိုင်စေရန် ပြင်ဆင်မှုများနှင့် ညွှန်ပြချက်များ ပီရူး သင့်အတွက်ရယူပါ။
ဒါကဖြစ်ပါသည် က်ဘ်ဆိုက် ကျယ်ပြန့်ပြီး အသိအမှတ်ပြုထားသော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ ပြပွဲတွင် အထူးပြုသည်။ ချက်ပြုတ်နည်းများလူကြိုက်များတဲ့ စားဖိုမှူးတွေကို ကွပ်မျက်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်ဖို့ ဟင်းချက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်ဘဲ မှန်ကန်စွာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ပီရူး. သို့သော်၊ ဤစာရေးခြင်းတွင် အနည်းငယ်လေးနက်စွာ စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာပြီး ၎င်းတွင် ရွေးချယ်စရာများနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရှာဖွေပါ။ myperuvianfood သင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
ယခင်က သင်ကြားခဲ့သလို၊ myperuvianfood တစ် ဦး အဖြစ်တင်ပြသည် အွန်လိုင်းအင်တာဖေ့စ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မျိုးစုံပြင်ဆင်မှု ပီရူးနိုင်ငံ၏ အမှတ်အသား၊ ရိုးရာနှင့် အကျော်ကြားဆုံး ဟင်းပွဲများ၊ မြို့တစ်ခုလုံးက ကျွန်တော်တို့ကို ပေးကမ်းခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့၊ ရဲရဲတောက်၊ ရှေးခေတ်၊ ခေတ်မီပြီး ခေတ်ပြိုင်အစားအစာတွေတောင်မှ အများအပြားက လက်ရှိမှာ ငါတို့ကို စွဲလန်းပြီး စွဲလန်းဖို့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာကြတယ်။
ဤစာမျက်နှာတွင် ကြီးမားသော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခု ပါရှိသည်။ အကြောင်းအရာကတ်တလောက်. ဤကိစ္စတွင်၎င်းကိုကြည့်ရှုလေ့လာလိမ့်မည်။ ပြင်ဆင်မှုများ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များပြင်ဆင်မှု နှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ဖြန့်ဝေသည့် ဟင်းမျိုးစုံ၏ ထူးဆန်းသော အချက်အလက်အချို့နှင့် သမိုင်းအကျဉ်းချုပ် မှတ်တမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
အောက်ပါနည်းဖြင့်၊ စာမျက်နှာအကြောင်းအရာ နှင့်၎င်း၏ဖြန့်ဖြူးရေး-
ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် သင်ရှာဖွေရန် ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများ အောက်ပါ မီးဖိုချောင် အမျိုးအစားများတွင်
ဒါက လတ်တလော မီးဖိုချောင်စတိုင်ပါ။ ပီရူး ဟင်းချက်နည်းများကို ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟီစပန်းနစ်အတိတ် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ဖန်တီးရန်၊ နိုင်ငံ၏ မူရင်းပါဝင်ပစ္စည်းများကို ကယ်တင်ပြီး တန်ဖိုးထားရန်။ ဤတွင် တာဝီ၊ ချူနို၊ ကွီနိုအာ၊ ကီဝီချာ၊ မိုရာယာ၊ ကိုချာယူယို၊ မကာ၊ ကိုကာနှင့် ငန်းတို့ကဲ့သို့သော မူရင်းအစားအစာများ ရောက်ရှိလာပါသည်။
ဤဟင်းလျာအမျိုးအစားတွင်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် ထိုဟင်းလျာများအားလုံးကို နေရာချပေးသည်။ ဆန် အဖော်ဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် အမှန်ပင်၊ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါစေ။ ကျေးဇူးပါ။ ကန်တုံ တရုတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ အာရှမှ ပေါက်ဖွားလာသော အရသာများကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဟင်းချက်နည်းများ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ က်ဘ်ဆိုက် ပီရူးနိုင်ငံမှ မဟုတ်ဘဲ အခြားနိုင်ငံများ၏ သေးငယ်သော အတိုင်းအတာဖြင့် အမြစ်နှင့် စွက်ဖက်မှုဖြင့် ဖြစ်သည်။
စည်းစိမ်ဥစ္စာ ငါး ပီရူး၏တိရစ္ဆာန်များတွင် ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသောကြောင့် ဟင်းလျာများသည် ဤသဘာဝရတနာများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ ဤအမျိုးအစားများထဲတွင် chupe မျိုးကွဲများဖြစ်သည့် ceviche၊ chalaca-style mussels၊ tiradios နှင့် seco တို့ဖြစ်သည်။
Creole အစားအစာသည် ၎င်း၏ ကနဦးကာလအတိုင်းဖြစ်သည်။ XIX ရာစု ၎င်းသည် ပီရူးဘုရင်မင်းမြတ်လက်ထက်တွင် ကမ်းရိုးတန်းမြို့များတွင် ပေါက်ရောက်သော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤတွင် ရာစုနှစ်များကြားတွင် အစားအစာအားလုံးကို ဖော် ထုတ်ထားသည်။ ၁၉ နှင့် ၂၀ နည်းစနစ်များ၊ သမိုင်းနှင့် အထူးအသုံးအဆောင်များနှင့်အတူ။
ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏ အထက်ပိုင်း၊ အင်ဒီးစ်များဖြစ်သည်။အစားအသောက်အပေါ်အခြေခံသည်။ အာလူး၊ ပြောင်းနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်နှင့် ခေါက်ဆွဲနှင့် လာမာ၊ အယ်လ်ပါကာနှင့် သားရဲတိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့သော အသားများကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် လက်တွဲပါ။ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ စာမျက်နှာမှ စားသုံးသူထံ ပေးပို့သော ချက်ပြုတ်နည်းများကို ဖော်စပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အားလုံးနှင့်အတူအစားအစာ ငံပြာရည်နှင့်အရည်များ ခြောက်သွေ့ပြီး အကြမ်းဖျင်းချက်ပြုတ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ သို့မဟုတ် များစွာတိကျမှုမရှိသော တောတွင်းဟင်းလျာများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ဤရွေးချယ်မှုတွင် မတူညီသောအမျိုးအစားကို ထည့်သွင်းပါ။ ကော့တေးများနှင့် အရက်သေစာများ. စပျစ်ရည် သို့မဟုတ် အခြားစိမ်ထားသော ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ အစိုင်အခဲများပါ၀င်သော ပြင်ဆင်မှုအားလုံး။
စာမျက်နှာအတွင်းတွင် သင့်ချက်ပြုတ်နည်းများကို အခြေခံ၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း သုံးစွဲဖို့အားလုံးကို ဖော်ပြပါမည်။ ရရှိနိုင်သော ဖော်မြူလာများ ဤကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်။
ထို အသုံးအများဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများ မကြာမီတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ပီရူးပြင်ဆင်မှုများအတွက် အသုံးများသည့်အရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ရှာဖွေရမည့်အရာကို သင့်တွင် စိတ်ကူးတစ်ခုရှိသည်။
ငါး၊ ခရုခွံနှင့် crustaceans
guinea pig သို့မဟုတ် guinea pigs
ပီရူးနိုင်ငံမှထွက်ရှိသော ဟင်းပွဲများအားလုံး အရေးကြီးရုံမျှသာ ၎င်း၏သမိုင်း၊ သင်္ကေတများကြောင့်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဖြစ်စေ ၎င်း၏ထူးခြားပြီး တုနှိုင်းမရသောအရသာကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ ဖြစ်တည်မှုအတွက် ပိုမိုပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ ထင်ရှားပေါ်လွင်သော ဟင်းပွဲအချို့လည်း ရှိပါသည်။ မြို့၏ အမွေအနှစ်များနှင့် ရိုးရာဓလေ့များ. ယင်းတို့အနက် အချို့ကို အတွင်း၌ နှစ်မြုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ myperuvianfood စိတ်ရှည်သည်းခံမှု၊ ၎င်းတို့၏ ခေါင်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Doña Pepa နူးဂတ်
ခရမ်းရောင်နှင့် quinoa ဂျုံယာဂု
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ချက်ပြုတ်နည်းများက ဘာအတွက်လဲ။
myperuvianfood ကျော်ကျော်နှင့် ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်ပါရှိသည်။ ဖော်မြူလာ 100 ပေးပို့ရန် ပန်းကန် သို့မဟုတ် သောက်စရာ အမျိုးအစားအလိုက် ဖြန့်ဝေပေးသည်။ ၎င်းသည် ပီရူးဟင်းလျာများ၏ အံ့သြဖွယ်ကောင်းမှု၊ ၎င်း၏ အရသာ၊ အရသာ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ ရနံ့နှင့် အသွင်အပြင်တို့ကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြသရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၎င်းသည် ဒေသခံများနှင့် ဧည့်သည်များကို အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ၎င်း၏သမိုင်းနှင့်အစဉ်အလာကိုလေ့လာပါ။ တင်ဆက်မှုတစ်ခုတည်းတွင်။
အလားတူ၊ ဤသည်မှာ သုတေသီတစ်ဦးစီကို ခွင့်ပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နေရာတိုင်းတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဟင်းမျိုးစုံကို ပြင်ဆင်ပါ။အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် အရသာအရှိဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် သင်လိုချင်သောပမာဏဖြင့် စားသောက်ဆိုင်သို့သွားရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များကိုပယ်ဖျက်ပါ။ ပီရူးမြို့တွင် ပေးဆောင်သော နှိမ့်ချသော သင်္ကေတနှင့် ဟင်းပွဲများအတွက်။
ထိုနည်းအတူပင် ဧည့်သည်အားလုံးကို ပစ်ချသော ကြားခံအရာ၊ အလွန်လွယ်ကူသောချက်ပြုတ်နည်းများ အဲဒါနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ၎င်းတို့ကို မျိုးပွားရန်အတွက် သင်သည် အတွေ့အကြုံအရှိဆုံး စားဖိုမှူးဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။. ချက်ပြုတ်သည့်အခါတွင် ကောင်းမွန်သော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုတို့၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့် စတင်သည့်အခါ ကောင်းမွန်သောသဘောထားဖြင့် စတင်ရန်လိုအပ်သည့် တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
ပလပ်ဖောင်းနှင့် အဆက်အသွယ် တစ်ခုခုကို ထူထောင်လိုသော ဆန္ဒရှိပါက၊ myperuvianfood ဒါဟာရှိပါတယ် ရိုးရှင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်း ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏သံသယများ၊ ပြဿနာများ သို့မဟုတ် ဆန္ဒများကို ဝဘ်၏ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့် မန်နေဂျာများထံ ဖော်ပြနိုင်ရန်၊ သင်၏တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် အခွင့်ထူးခံများကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး သင်၏နေထိုင်မှုနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်။
ဤအလတ်စားအဖြစ် တင်ပြသည်။ ပုံသဏ္ဌာန် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
နာမတျောကို: ဤဒေတာသည် သင့်အား ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝိသေသလက္ခဏာ တောင်းဆိုချက်၏ ပိုင်ရှင်ထံ၊ တုံ့ပြန်မှု သို့မဟုတ် အာရုံစိုက်မှုတောင်းဆိုမှုကိစ္စများတွင် လူကို ရည်ညွှန်းရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
စာပို့ အီလက်ထရောနစ်: page ပိုင်ရှင်များ အဖြေတွေ ပို့ပေးမယ်။ သင့်အီးမေးလ်သို့၊ ထို့ကြောင့် ဤလိပ်စာသည် အရေးကြီးပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း: ဤနေရာသည် သင်တစ်ဦးအား တာဝန်ပေးမည့်နေရာဖြစ်သည်။ မက်ဆေ့ချ်တွင် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ငြင်းခုံမှု. နေရာလွတ် အနည်းငယ်သာရှိသဖြင့် ဖော်ပြချက်သည် တိုတိုနှင့် တိကျရပါမည်။
မက်ဆေ့ခ်ျကို: ဒီနေရာ မှာ သင်လုပ်နိုင်တယ်။ အစီရင်ခံစာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့် တစ်စုံတစ်ရာ အဆင်မပြေမှုများ။ တစ်ခုရှိ ကြီးမားသောအာကာသ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိခိုက်စေသည့်အရာအားလုံးကို နှစ်သိမ့်မှုနှင့် လွတ်လပ်မှုဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အတိအကျနှင့်အသေးစိတ်ဖြစ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ ပြဿနာ သို့မဟုတ် မေးခွန်း၌